Menus boribory amin'ny CSS: karazana tonga lafatra 11 hamoronana tranokala manaraka | Famoronana an-tserasera
Menus boribory 11 amin'ny CSS sy HTML hanaraka ny fenitry ny famolavolana tranonkala ankehitriny
Manohy amin'ny iray hafa izahay lisitr'ireo menus boribory lehibe ao anaty CSS toy ny amin'ny HTML hahafahanao mampifanaraka azy ireo amin'ny filan'ny tranonkalanao. Ireo menus boribory ireo dia manandrana manome ny menio hamburger fomba iray sy sary mihetsika manodidina ny boribory; tsy misy hafa amin'ny tsy izy.
Misy karazany maro ary koa ny tonga lafatra izay afaka manome ny fifantohana ilaina amin'ny lohahevitra manokana. Ny sary mihetsika sy ny endrika minimalista dia afaka manome famantarana an'ireo mpitsidika mba hahafantaran'izy ireo fa manana maso tsara isika hanome ny kalitaon'ny tranonkalantsika amin'ny famolavolana tranonkala. Andao ataontsika amin'ny menus boribory 11, fa tsy manery ny hifandray aloha amin'ny lisitry ny menus CSS hafa.
1 Lisitry ny fitetezana boribory
2 Menio boribory mitsingevana
3 Bara fitetezana boribory
4 Sakafo ara-nofo boribory
5 Menio boribory
6 Lisitry ny radial amin'ny CSS
9 Animation radial animated
10 Fivoahan'ny fitetezana boribory
11 Lisitry ny boribory mihodina
Lisitry ny fitetezana boribory
Hita ao amin'ny CSS sy HTML ity menio fizaran-tany boribory ity, noho izany dia tsotra ny fampiharana azy raha zatra miasa miaraka amina kaody ianao. Nomena sary mihetsika mahafinaritra sy fomba faran'izay kely izay mametraka azy eo amin'ny tsara indrindra amin'ny lisitra.
Menio boribory mitsingevana
Bara fitetezana boribory
Ity bara boribory ity dia aingam-panahy avy amin'ny Ny fiteny famolavolana Google antsoina hoe Material Design. Raha mitady ny sasany amin'ireo fiteny ireo ianao dia efa mila fotoana ny fampidirana azy ao amin'ny tranonkalanao.
Sakafo ara-nofo boribory
Menio boribory iray hafa ho an'ny Design Material ary izay miavaka amin'ny ambiny ho an'ireo andiana kisary miseho mijoro. Manaitra ary miaraka am-pamaranana tanteraka; tsy tsara tarehy, fa toa tsara.
Ity menio ity dia miaraka amina sary mihetsika izay hanitatra ny bokotra hamburger mba hampisehoana ireo fizarana samihafa azonao aleha amin'ny tranokala nampidirina.
Lisitry ny radial amin'ny CSS
Ity menio radial ity dia vita amin'ny CSS sy HTML. Dia a menio boribory tena hita maso ho an'ireo andian-tsary izay miseho rehefa manindry ny kisary hamburger. Io lafiny io ihany no mampiavaka azy.
Iray amin'ireo menus boribory mamorona indrindra ao anaty lisitra, miavaka amin'ny a tena niasa tsara ny sary mihetsika. Tsy mila manindry akory ianao hahitanao ireo fizarana menio isan-karazany ao amin'ny tranonkalanao.
Ity menio ity dia manoa an'io karazana sarimiaina io antsoina hoe Gooey izay manao ireo fizarana isan-karazany mikoriana avy amin'ny bokotra hamburger. Lisitry ny boribory tsy mitovy amin'ny ambiny ao amin'ny CSS, noho izany dia vonona ianao hampiditra azy ao anaty tranonkala. Sarimiaina manintona sy mahasarika ny maso no tena mampiavaka azy amin'ny ambiny.
Animation radial animated
Fivoahan'ny fitetezana boribory
Gazety fohy eo amin'ilay kisary hamburger no manokatra tanteraka ireo faritra samihafa manitatra ny faribolana ary afaka manindry amin'ny tsirairay. Raha misy fiatraikany hover raha mitazona ny totozy amin'ny iray amin'izy ireo ianao, dia lasa mahaliana kokoa noho ilay teo aloha, izay somary fototra kokoa.
Lisitry ny boribory mihodina
Ity dia iray amin'ireo menus boribory faran'izay tsotra sy mamorona amin'ny lisitra iray manontolo. Izany dia azo namboarina ary hampahatsiahy anao ny telefaona iray amin'ireo ntaolo fa tsy maintsy navilainay ny rantsan-tànana hanaovana ilay antso amin'ireo isa tsirairay. Sarimiaina mahafinaritra ho an'ny menio boribory izay miavaka amin'ny ambiny ao an-kibo. Tena sary mihetsika izay mahatratra izany vokatra rehetra izany, koa raha mitady menio mahafinaritra sy liana amin'ny lohahevitra manokana ianao, toy ny foibe fiantsoana dia mety tsara ho azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Menus boribory 11 amin'ny CSS sy HTML hanaraka ny fenitry ny famolavolana tranonkala ankehitriny
Tsara, misaotra anao noho ny fampakaranao azy ireo miaraka amin'ireo kaody. Misaotra betsaka. Ity pejy web ity dia mandeha hatrany amin'ny bara famaritana.
Mamolavola marika divay miasa tsara
Ny New York Public Library dia manamora ny fampidinana ireo sariny maherin'ny 180.000